बुबालाइ बृद्धआश्रममा छोड्ने छोराले भने,‘बाऊ भनेर त्यो बुडोलाई पाल्दा धर्म लाग्छ भने थुक्छु म त्यो धर्मलाई’ (भिडियोसहित) – Newsharpal24
काठमाण्डौ । आफ्नै जन्म दिने बाबुलाई सानोमा आफुलाई र आमालाई नहेरेको भन्दै छोराले वास्ता नगरेपछि अहिले उनका ती छोराका बाबु बृद्धा आश्रममा छन् । उनले दिनहुँ गेटमा अरुलाई नै भेट्न कोही आउँदा पनि आफ्ना छोराहरु आएकी भनेर बाटो हेरी बस्छन् । उमेरले ७० लागेका ती बाबु हुन् किशोर लामा । उनका दुई छोरा र एक छोरी छन् । श्रीमती पनि जिउँदै छन् । सबै परिवार हुँदाहुँदै पनि उनी बृद्धाश्रम गएका छन् ।त्याहाँ बसेर उनले प्रत्येक दिन आफुलाई भेट्न घरबाट कोही त आउँछन् होला भन्दै गेटतिर हेरिरहन्छन् ।
तर उनको परिवारबाट आजसम्म न छोराछोरी गए भेट्कोलागी न त श्रीमती नै । आखिर किन ? भन्ने प्रश्न उब्जन्छन् । किन आफ्नै श्रीमानलाई बृद्धाश्रम जान बाध्य बनाईन् श्रीमतीले र छोराछोरीले बाबुलाई ? भन्ने प्रश्न उनको श्रीमती र छोरालाई गर्दा उनीहरु भन्छन्,‘त्यो उस्लाई पापको सजाय भएको हो । अझैं धेरै हुन बाँकि छ ।’ यस्तो जवाफ सुनेर सबै जना चकित नै परे ।छोराको भनाई अनुसार किशार लामाले दुईवटी श्रीमती बिहे गरेका थिए । र सम्पत्ति सबै कान्छि श्रीमतीको नाममा गरिदिएको र आफ्नी आमालाई हेला गरेका रहेछन् ।
बाबु जीवित हुँदाहँदै आमाले दःखले आफुहरुलाई हुर्काएको हुनाले छोराछोरी सबैले आमालाई नै समर्थन गर्दा रहेछन् । छोराको भनाई अनुसार उनका बाबुले (किशोर) ले आजसम्म आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो घरपरिवारको बारेमा नचिएको हुनाले आफुले पनि कुनै काका, बाजे, मूल घर केही पनि नचिनेको बताए ।किशोरको छोराले मात्र नभई श्रीमतीले समेत किशोरको बृद्धाश्रमको बसाईलाई सजायको बसाई भएको बताएकी छन् ।
उनले रोएर मिडिया र अरुको मन जित्ने अनि माया पाईने भए आफु पनि रुँदै सबै कुरा सबै सामू बताईदिने कुरा गरिन् । उता छिमेकीहरु सबैले छोराभएको नाताले एकपटक बाबुलाई भ्ेट्न जाऊ न भन्दा‘बरु म मन्दिरका अरु गरिब भिखारी या परिवारबाट बहिष्किृत भएकाहरुको सेवा गरुला तर यो बुढाको सेवा गर्नेछैन ।’ भन्ने जवाफ दिए । भिडियोसहित
Tagged ‘बाऊ भनेर त्यो बुडोलाई पाल्दा धर्म लाग्छ भने थुक्छु म त्यो धर्मलाई’ (भिडियोसहित)बुबालाइ बृद्धआश्रममा छोड्ने छोराले भने